Culimada Soomaaliyeed oo iclaamisay Soon iyo Salaad roob doon ah dhammaadka toddobaadkan – STAR FM SOMALIA
Culimada Soomaaliyeed oo iclaamisay Soon iyo Salaad roob doon ah dhammaadka toddobaadkan
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqday 4 maalin oo soon ah iyo in maalinta Sabtida dalka oo dhan laga tukado Salaad Roob Doon ah.
Guddoomiyaha Hay’ada Culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa sheegay inay muhiim tahay in la is cafiyo dadkuna ay Alle bari sameeyaan.
Sheekh Bashiir waxa uu sheegay in Arbacado todobaadkaan ay ugu baaqeen Shacabka Soomaaliyeed inay soomaan si alle dhibta Abaarta uga dul qaado iyadoo Sabtidana Isku soo bax Roob doon ah la qaban doono.
Baaqa Hay’adda Culimada ayaa ku soo beegmaya iyadoo Xaalado Bani’aadanimo oo aad looga deyrinayo ay ka taagantahay dalka Soomaaliya.
Maaliyiin kamid ah dadka Soomaaliyeed ayaa qarka u saaran macluul, iyadoo qaar kamid ah gobalada dalka laga soo sheegayo in dadku ay u dhimanayaan cudurrada faafa ee ka dhashay abaarta.
Abaarta ka jirta dalka Soomaaliya ayaa ka dhalatay kadib markii ay da’i waayeen roobabkii deyrta isla markaana roobkii guga uu ahaa mid aad uga yar sidii hore ayna haatan qalaleen warihii,wabigii Shabelle iyo qaar kamid ah ceelasha dadka ay biyaha ka cabi jireen.
Nabad Suggida Gobolka Gedo oo soo bandhigtay rag Shabaab ah iyo hubkii ay wateen
Madaxweyne Farmaajo Ayaa Ka Qeyb Qaadan Doono Shir Kadhacaaya Dalka Kenya